Ihe site Lyndon Reys	 0 Comment
Ịgbalị iji chọpụta ma ma ọ bụ na Kratom bụ iwu iji na North Carolina? Iwebata nke Mitragyna Speciosa ogwu n'ime US ahịa n'ezie nanị malitere n'ime afọ iri gara aga na nke a dugara ụfọdụ mgbagwoju anya n'elu ya legality. Maka ugbu a, Kratom ojiji bụ iwu na North Carolina, ma nke a wee ghara ịnọgide ikpe n'ọdịnihu. Juru ebe nile media-ezighị ezi banyere mmetụta nke a osisi mere ka ọtụtụ ndị ọzọ na-amalite pushing machibido ogwu. Nke a ga-enwe n'ezie nzukọ nyere puku kwuru puku ndị America na-Ebe E Si Nweta Kratom doo na-agbanwe ndụ ha ka mma n'ọtụtụ ụzọ. Ịzụta Kratom Online si atụ aro mgbere ebe a.
Kratom na North Carolina
Ọ bụ ezie na Kratom bụ iwu na ọ dịghị ihe mgbochi a na-etinye na-eji ya n'ogo steti, ọ bụ siri ike ịhụ na ọ na-echekwa na steeti. N'oge gara aga afọ, Kratom ka esiwanye e looped na saa salts, sịntetik ọgwụ ọjọọ, incenses, na ndị ọzọ na ngwaahịa-atụle ga-"iwu highs." Ma ọrụ nke Kratom ntụ ntụ maara na ọ na-adịghị remotely metụtara ndị a na ngwaahịa na nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-emekarị ndị nchegbu-mbenata herbs dị ka Valerian Mgbọrọgwụ.
Ọtụtụ North Carolinians na-ata ahụhụ site na nke a ikenenke tụnyere. Health shop ụlọ ahịa nwe bụ obere yiri na-ebu Kratom ngwaahịa ruru na-atụ egwu n'elu ga-eme n'ọdịnihu ụkpụrụ. Kratom ọrụ na-ata ahụhụ n'ihi na ha na-agaghịkwa enwe obodo ohere ka ogwu ruru ka n'amaghị banyere otú ndị ogwu n'ezie na-arụ ọrụ.
Olee otú ị pụrụ Zụrụ ya
Ugbu a, Kratom ize ndụ na-iwere anya ahịa n'ihi na nke uche ọ na-na-na Food na ọgwụ ọjọọ nchịkwa (FDA). Nke a na-ogwu e FDA mma, na nke a kwadoro na-ele mgbere na-ere ogwu dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe mmadụ na-oriri. Iji na-ere ihe na-abụghị ihe nchebe na-aṅụ site FDA ga-a gọọmenti etiti mebiri, nke mere na kratom dị oké ize ndụ nke ịbụ iwu na NYC.
Kratom bụ ihe herbal ngwaahịa, ma ọ bụghị nri. Ị nwere ike ingest ya na ọ bụ ihe ọzọ ọgwụ na e bu n'uche ka a ga-eji ka ọ bụla ọzọ ma ọ bụ vitamin ịnweta. N'ihi na ọ bụ a nri, FDA iwu ekwesịghị itinye. Ọ bụrụ na ndị ahịa nwe amaghị otú kwesịrị ekwesị ịkpọ ngwaahịa, mgbe ahụ, ha n'ihe ize ndụ ịtụkwasị Kratom n'okpuru na-ekwesịghị ekwesị shelf aha mmado. Nke a pụtara na ọ nwere ike ina bukọọrọ site FDA ma ọ bụ ya mbubata a pụrụ igbochi. All nke a pụtara na a Head ulo ndị kasị mma na ọnọdụ ịzụta gị Kratom ngwaahịa.
Ịzụta ya n'iwu na Safely
Iji mee ka azụ nke Kratom obere controversial na mfe, ị pụrụ iji na-agbalị na-online ere. Ebe a na-ole na ole mere nke a ji dị mma karịa ịga na mpaghara isi ụlọ ahịa:
*Na-ekwe nkwa legality
*Afọ Ojuju na-ekwe nkwa ma ọ bụ gị ego na-azụ
*Lower nnukwu ahịa
*More ihere ahịa ọrụ
*Ndenye, nzuzo mbupu
Gị nnyocha site apụ forums na ngwaahịa nyochaa saịtị ịhụ ihe ọ bụla na-ekwu. Otu na saịtị gbalịrị na ezi bụ Arena Ethnobotanicals. Ị nwere ike adịghị eti ha elu àgwà ngwaahịa nhọrọ, legality, na ngwa mbupu. Dị nnọọ mara na i nwere ike ịtụ n'ebe ọ bụla na US ebe Kratom bụ iwu. Ị nwere ike ịtụ si North Carolina onwe ya ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa ebe Kratom bụ iwu na-echebe. Lelee anyị na ndu ka mmetụta nke Kratom nje ebe a.
Ọ bụ ezie na Kratom bụ ka iwu na North Carolina, ọ bụ ihe kacha mma ịzụta ya si online venders otú ị ga-enweghị ike iche banyere iwu okwu na raids. Mgbe ahụ, mgbe gọọmenti mesịrị ọfiọkde nnọọ otú dị mma ma dị irè a ya bụ, ma eleghị anya, ha ga-agbanwe obi ha banyere nke a na-eto eto na-emekarị na otu Kratom na-emerụ bekee.
Ọrụ 'Kratom Nyocha N'ihi The Best iche-iche na ndị mgbere
Kratom Tii Review: Olee otú iji na Ahụkarị Results